Mwedzi Archives: Ndira 2022
Mwedzi: January 2022
Apple Pay tekinoroji yekubhadhara isingabatike yeApple zvishandiso. Yakagadzirirwa kutamisa vatengi kure nemawallet emuviri kupinda munyika umo ...
Apple yakazotanga kuburitsa Universal Control, asi iwe unofanirwa kuisa yazvino yekuvandudza betas yeiPadOS uye macOS Monterey kuyedza ...
Philips OLED807 TV ndeimwe yekutanga kushandisa itsva, inopenya OLED EX panhi
TP Vision yakazivisa yayo yekutanga Philips-yakanzi OLED TV kushandisa LG Display nyowani, inopenya OLED EX pani. Iyo Philips OLED807 inouyawo ne...
Kuenderera mberi chinhu chinobva kuApple chinokutendera kuti uchinje pakati (kana kushandisa pamwe chete) yako iPhone, iPad, Mac, iPod Touch uye Apple Watch. Izvo...
Philips 'mutsva Fidelio kumba theatre system inopa kwete chete yakatenderedza ruzha, asi yakatenderedza Ambilight futi.
Philips yakazivisa itsva Fidelio kumba theatre system iyo isingangounze Dolby Atmos, asi ichawedzera yako Ambilight ruzivo kune yako ...
Philips Audio inotangisa vatauri vekunze vakaomarara vachipa stereo pairing
Philips yakazivisa huwandu hwemidziyo yekuteerera ye2022, kusanganisira mitsva inotakurika yekunze vatauri. Iwo anobata-anonzi S4807 uye S7807 vatauri veBluetooth vakagadzirirwa ...
TV nyowani muPhilips '"Iyo" Performance Series yakaziviswa. Iyo Philips 8807 TV yakagadzirirwa kupa zvakanakisa maficha asi inochengeta...
Maitiro ekubatidza Kindle rima modhi
Rima modhi itsika hombe izvozvi, ine mafoni nemalaptops ari kufamba achipa rima modhi mumakore mashoma apfuura. Izvo zvakawedzerwa ku...
Netflix yave iripo paSky Q kwemakore mashoma apfuura. Pane nzira mbiri dzaunokwanisa kuwana iyo yekufambisa sevhisi...
Google Nest ine zvishandiso zvakati wandei mupotfolio yayo kubva kuma thermostats nemakamera kusvika kumabhero epagonhi uye madetector ehutsi. Muchikamu chino, takatsanangura mazano ese ...
Maitiro ekugadzira, kuseta uye kushandisa iCloud email account
Pane akati wandei sarudzo dziripo kana zvasvika pakumisikidza email account nyowani, asi kana uri kutsvaga kuseta...
Facebook Messenger iri kuwana chigadziriso chinobvumira munhu wese kuti encrypt yavo yakananga mameseji, chats dzeboka, uye mafoni. Facebook yakatanga kuyedza neend-to-end encryption...